Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato daabacaadda dejinta | Abuurista khadka tooska ah
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato daabacaadda dejinta
Intii aan ku jirnay shaqadeena, waan la kulanay maadooyinka la isweydiinayo mararka qaarkood ku saabsan waxtarkeeda ku dhex jirta xirfadda xirfadeed ee xirfadeena. Su'aashaan waxaa lagu sharixi karaa a arrinta dhaqanka akadeemiyada gudaheeda, taas oo ah, in cunsuriyad badan ay kuqeexday ardaygu, oo nooga dhigeysa qaab aan aqbali karin waxyaabaha kujira barashada.
Sidaas darteed, su'aal kale waxay noqon kartaa sababo macquul ah, taas oo ah, xaqiiqda ah inaan laga helin gudaheena qaab dhismeedka wax ku oolka ah ee heer aqooneed iyo macnahaas, aad ayey uga yar tahay diyaaradda dhaqanka xirfadeed.
1 Waa maxay daabacaadda dejinta?
2 Waa maxay dhibaatada haysata adeegsiga qaabkan midabku?
3 Xalka feylashayada waa inuu noqdaa arin
Waa maxay daabacaadda dejinta?
Kuwaas oo dhan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu xisaabtamo hal shay, wax u shaqeeyaan si cayiman sababo jira awgood iyo in taasi ay tahay in wax walboo sabab u dhacaan, waxba nolosheenna gudaheeda kuma xirna oo macnahaasna (iyo kiiskan), waxba ugama dhex socdaan sii socoshada tababbarkayaga waxbarasho. Sababtaas awgeed, qodobkaan waxaa loo qoray dhiirigelin xisaabeed waxa loogu yeero Pre-daabacaadda ku saabsan waxtarkeeda iyo muhiimaddeeda, iyadoo la qeexayo waxa shaqooyinkeedu yihiin si kooban oo guud ah.
Waxaan soo bandhigi doonaa xoogaa tixgelin ah oo ku saabsan tilmaamaheeda iyo heerarka ka socda aagga naqshadeynta garaafka.
Marka hore, waan tixgelin doonaa qaabka midabka waana in guud ahaan, naqshadeeyayaashu ay u muuqdaan inay ku shaqeeyaan moodooyinkooda qaab Midabka nooca RGB, midabada ayaa loo isticmaali jiray in lagu muujiyo shaashada kombiyuutarka.
Waa maxay dhibaatada haysata adeegsiga qaabkan midabku?
Inta lagu jiro tilmaamaha ka jawaabaya sameynta jeesjeeska wax dhibaato ah malahan. Si kastaba ha noqotee, badeecada ugu dambeysa waa la waxyeeleyn karaa Iyadoo la adeegsanayo qaabka RGB, in kasta oo dabcan, tani ay tahay mid iska timid oo ujeeddooyin wax ku ool ah laga leeyahay, ayaa Qaab midabeedka CMYK, kaas oo dammaanad qaadaya 100% midabyo kala duwan oo ku habboon daabacaadda iyo dareenkaas, dhowr dhinac waa in la tixgeliyaa.
Waa la isticmaali karaa Qaabka RGB ee dhammaan shaqooyinka khuseeya nashqadeynta jees jeeska, laakiin waqtiga daabacaadda, waa Waxaa lagugula talinayaa inaad kuqanciso jees jeeska qaabka CMYK.
ka dhiigbaxs waa qayb kale oo lagama maarmaan u ah qaab dhismeedka naqshadeynta taasna waa mahadsanid dhiigbaxa, waxaan ku faahfaahinnay shaqadeenna aasaaska u ah dulqaad dulqaad ah marka la eego geesaheeda, oo noo oggolaaneysa inaan wajahno farqigaas suurtagalka ah ee qaladka ku jira daabacaadda badeecadeena. Marka la eego ficilka, waa lagama maarmaan markaa dhaafi khadka goynta uguyaraan 2mm, si aad u hesho aragti bilaash ah oo ka mid ah xariijimaha cad ee qalloocinaya geesaha jees jeeskeenna.
Margins-ka ayaa ah qodob kale oo laga fiirsado marka lala macaamilayo dalabaadka macaamiisheenna, gaar ahaan marka xilligu yimaado markay tahay wuxuu go'aansaday inuu qaato qoraal ka badan xadadka dulqaadka meheradaheena. Waxa ugu fiican ee xaaladdan lagu sameeyo waa in la baro wax ka yar 7mm, taas oo kordhinaysa dulqaadkeenna dulqaadka muuqaalka uu macmiilkeennu dalbanayo. Waxay ku saabsan tahay inaad ka feejignaato waxa badanaa albaabka ku garaaca hab caajis ah.
Xalka feylashayada waa inuu noqdaa arin
Waxay ku saabsan tahay yaree ama weynee sawirrada. Kuwani waxay naga qaadi karaan tayo, waqti iyo qeexitaan, sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa inaad adeegsato barnaamijyada tafatirka muuqaalka, oo ay kujiraan yareynta ama ballaarinta howlaha iyo sawirrada.
Qiyaas wanaagsan isaga qaabka sawiradayada u beddelashada natiijooyinka PDF. Waana in qaabkani noo dammaanad qaadayaa xiriir wanaagsan oo u dhexeeya shaqadeena iyo badeecada ugu dambeysa, taas oo, shaki la'aan, waa in lagu tixgeliyaa isla diyaaradda.
La daabacaad aan qasab ahayn Waa madax xanuun horumarinta naqshadaha cusub xalkena ugu fiican ayaa ah adeegsiga barnaamijyada noo oggolaanaya inaan qadarinno moodelkeenna diyaarad ka mid ah xulashooyinka oo ka reebaya dulmarka xulashooyinkayaga, hubinta in la sameeyo markay run ahaantii kiiska tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato daabacaadda dejinta
Aniga oo aqoon fiican u leh tikniyoolajiyadda garaafka, waxaan u arkaa inay lama huraan u tahay naqshadeeye garaaf ah; Tani waxay noo ogolaaneysaa inaan si cad uga hadalno fursadaha iyo xaddidaadaha go'aaminaya natiijada ugu dambeysa ee daabacaadda, laga bilaabo aqoonta tayada waraaqaha kala duwan. Daabacaadda 'Offset' waxay leedahay codsi ballaaran oo ku saabsan wax soo saarka garaafka ah iyo gaar ahaan dhexdhexaad iyo kuwa dhaadheer tan iyo markii tayada wax soo saarka iyo kharashyada wax soo saarku ay si weyn ugu tartamaan daabacaadda dhijitaalka ah Naqshadeeye wanaagsan waa inuu ogaadaa waxa ugu habboon farsamada daabacaadda iyo taageerada sheyga ay bixiso.
Jawaab Adonías Aliendres
Madaxa Naqshadeynta Sawirka
Shuruudaha nooca ee ah inaad ka ogaato Naqshadeynta Sawirka